Maitiro ekuita nekushomeka kwevhitamini kushomeka | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Maitiro ekuita nekushomeka kwevhitamini kushomeka
Chitubu chauya. Mangwanani shiri dzinoimba kunze kwehwindo, asi zvakawoma kumuka, uye mushure mebasa hapana simba rakaringana chero chinhu. Kazhinji pane kunzwa kuti mangwana unogona kubvisa chando.
Iwe unogona kazhinji kunzwa kuti zvipikiri zvako zvinotanga kupwanya, kupukutira kubva paganda rako, uye bvudzi rinobuda. Kusagadzikana kunoratidzika, kushushikana kwakashata, chirwere chisingaperi chinowedzera, etc. Zvese pamusoro apa zviratidzo zvekushomeka kwevhitamini kushomeka.
Sei kusimbisa muviri muchirimo?
Kushaikwa kwevhitamini mamiriro ayo muviri usina mavhitamini akakwana. Kazhinji izvi zvinosanganisira kushaya simba kwekudzivirira, izvo zvichazotungamira mukuwedzera kwechirwere chisingaperi, pamwe nekukwira kwepamusoro kwekuonekwa kwehutano hwakasiyana siyana hwehutachiona.
Ehezve, nekuda kwechokwadi chekuti mamiriro aya haaperekedze chero chirwere chine njodzi, zviri nani kutora bvunzo. Asi vanachiremba vanopa huwandu hwekuti 85% yevanhu vane vhitamini yekushomeka.
Iwe unogona kugadzirisa mamiriro acho uchibatsirwa akasiyana siyana eamgantivitamini uye mamineral. Asi usakurumidza kumhanyira kune kemesi uye kushandisa mari yakawanda. Iwe unogona kudzosera kuwanikwa kwevhithamini mumuviri nerubatsiro rwezvigadzirwa izvo mukadzi wese wepamba mukicheni anazvo.
Vitamin kushomeka muchirimo - decoctions inobatsira
Iwe unogona kuzadza muviri neyakafanira huwandu hwenuturu nerubatsiro rwezvinwiwa. Panguva imwecheteyo, zviri nani kutsiva tii nekofi neiyo rosehip muto, michero yakaomeswa compote kana infusions ye viburnum michero.
Izvo zvinobatsira kwazvo kuti muviri muviri utore maresi akagadziriswa akagadziriswa kubva kune akasiyana miriwo nemichero. Mushure mekuputika inofanirwa kuinwa iyo kwemaminetsi gumi nemashanu. Naizvozvo, kune iro ramangwana muto harudi kuitwa.
Kune akawanda mavitamini mune herbal gadziriro, ivo vachakubatsira iwe kutarisana neyechirimo vhitamini kushomeka. Iyi yekubheka inotevera inobatsira. Lingonberries, nettle mashizha uye rose chiuno zvinotorwa muhuwandu hwakaenzana. Wobva wadururira musanganiswa wapedzwa nemvura inovira. Mune girazi yemvura iwe unofanirwa kutora makumi maviri magiramu ekuunganidza. Zvakanaka kuisa zvese mu thermos, sezvo uchifanira kuomerera kweanoda kusvika maawa mana.
Sefa uye unwe. 200 ml yeinwiwa inogona kudyiwa katatu pazuva - vhitamini kushomeka kunodzoka!
Supuni yehuswa hwe primrose inomiswa negirazi yemvura inovira kwemaminetsi makumi matatu. Isu tinofa uye tinonwa 70 ml yechinwiwa hafu yeawa tisati tadya.
Chii chakanakira kudya nekushayikwa kwevhithamini?
Muchirimo, kutarisa kwakakosha kunofanirwa kubhadharwa kune chikafu. Imwe yemavhitamini anonyanya kukosha inosimbisa immune system ndeyevhitamini C. Inowanikwa mumarudzi ese kabichi, hanyanisi hanyanisi, currants, uye michero yemichero. Asi zvakakosha kuyeuka kuti panguva yekurapa kupisa iyi vhitamini inoparadzwa.
Nekushaiwa kwevhitamini A, kukura kwemuviri kunodzikira. Yakawanda yevhitamini A inowanikwa mumakaroti nemakungu. Izvo zvakakosha kune immune system, uye zvakare chengetedza ganda mune zvakanaka.
Kune uropi, iwe unofanirwa kudya hove. Aya mavitamini D uye mafuta ane hutano. Iyi vhitamini inowanikwawo mune zvigadzirwa zvemukaka, zai yolks. Inobatsira kusimbisa mapfupa, mazino.
Chinhu chinoshamisa cheantidepressant is Vitamin B1. Iye ndiye anoshanda nebasa reiyo sisitimu yenyonganiso, metabolism.
Parizvino mune zviyo, nyemba, nyama, nzungu. Walnuts ane akawanda mavitamini uye zvicherwa.
Kuti uvandudze kugaya, kabichi inofanirwa kuwedzerwa kune yekudya. Iyo ine potasium, mavitamini C uye PP, pamwe nefungi yakasikwa.
Uye kazhinji kazhinji iwe unofanirwa kuve uri mumhepo nyowani, uye kwete kunyepa pamberi peTV kumba. Ipapo kwekushaiwa simba kwemashure uye kushomeka kwevhithamini hazvizove zvinotyisa.
Usati washandisa decoctions yemakwenzi kana zvimwe zvigadzirwa, tinokurudzira zvikuru kuonana nachiremba!
Maitiro ekuita nekurara kubasa: nzira dzinoshanda uye mazano
Yakavharwa comedones: nei vanomuka uye maitiro ekuita navo
Kubvisa chirwere. Chii icho uye maitiro ekuchiita nacho?
Acne kumusana kwevarume: kurwa sei?
Mibvunzo ye61 mu database yakagadzirwa mu 0,437 masekondi.